Sida loogu daro Instagram Tik Tok | RoidHub
»Sida Instagram loogu daro Tik Tok
Sida loogu daro Instagram Tik Tok
Barta Instagram-ka ayaa ahayd qiiqii ugu horreeyay ee jiilka da’da yar ilaa ay TikTok ciribtiriso cinwaankaas. Ma ogtahay in bogga Instagram laguugu dari karo koontadaada TikTok? Marka waxaan kuu sheegi doonaa sida loogu daro Instagram Tik Tok.
Labada qalab ee ugu badan ee loogu talo galay dhallinta waqtiga haysa ayaa wata xoogaa qalooc ah oo u gaar ah goob kasta. Mid walbaa wuxuu leeyahay astaamo iyo awoodo u gaar ah. Haddii aad go'aansato inaad mid uun dadka ugu bixisid. Waxaa jira fursad aad u fiican oo aad wax badan ku dhaafikartid kan kale.
Sida loogu daro Instagram Tik Tok?
Sida Loogu Xiriiro Xisaabta Labaad ama Ganacsi ee 'Instagram' TikTok
Sida loo xiriiro Instagram ka TikTok
TikTok waa xulashada go-to-ah ee loogu talagalay fiidiyoowga mobilada gaaban iyo xiisaha leh. Kuwani xiisaha iyo xiisaha gaaban ee xiisaha leh way fududahay in la abuuro oo lagu dhejiyo app-ka.
Codsigu wuxuu xambaarsan yahay dhammaan noocyada waxyaabaha ka kooban oo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku qanacdo wakhti kasta oo leh mawduucyo aan dhammaad lahayn oo cajiib ah oo qosol leh. Dhammaan waxay u kala horreeyaan dhadhankaaga iyo jeceshahay.
In kasta oo Instagram-kii hore ka horreeyay Tik Tok. Waxay raacdaa falsafad ka duwan abuurista tusmada iyo wadaagista. Iyada oo leh sawirkeeda cajiibka ah iyo filtarrada fiidiyowga. Wali waa madal sare oo loogu talagalay horumarinta waxyaabaha iyo wadaagista.
Laakiin TikTok kaligiis ayaa kugu filan inuu kugu mashquuliyo muddo aan dhammaanayn. Wali, dadku waxay rabaan inay waqti siiyaan Instagram-ka sidoo kale. Marka haddiise aad adigu weydiinaysid "Sideen ugu dari karaa Instagram-kiisa TikTok '?
Waxaan kugu soo qaadan doonaa hawsha. Noqo taleefankaaga Android ama aaladda apple-ka ama iPhoneka aad xambaarto. Jawaabta sida loogu daro insta tok tok waa fududahay.
Waad xiri kartaa labada barnaamijyadooda. Dadka qaar ayaa dibedda u isticmaalaya barnaamijka 'TikTok app' si ay u abuuraan sheekooyin Instagram iyo muuqaallo xaalad ah. Si kastaba ha noqotee, intooda badani kama warqabaan xaqiiqda ah in labadan barnaamijba lagu xiriirin karo isla tooska aagga Tik Tok.
Kahor intaadan bilaabin xiriirin xisaabaadka kujira labadan barnaamij. Waa inaad ogaataa inay yihiin laba dalab oo kala duwan oo ay leeyihiin shirkado aad u kala duwan. Insta waxaa iska leh Facebook iyo Tik Tok waa shirkad Shiinees ah.
Si aad ula xiriirto Instagram iyo TikTok, waa inaad ku rakibtaa labada barnaamijba taleefankaaga. Maadaama aad halkaan joogtid. Waxaad horey u lahaan laheyd labadaba xisaab. Hadda waxaad diyaar u tahay inaad ka gudubto howsha. Marka sidan ayaa ah sida loogu xiro Instagramka TikTok.
Kuwani waa tillaabooyinka. Ku samee iyaga sida ay u kala horreeyaan oo ma joogi doontid waqti la'aan.
1 Fur barnaamijka Tik Tok oo taabo astaanta astaanta guud. Waa geeska hoose ee midigta isla marka aad codsi kahesho shaashadda qalabkaaga.
2 Hadda dhagsii ikhtiyaarka astaanta tafatirka mar aad marayso tallaabada ugu horreysa.
3 Halkan waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka si loogu daro boggagaaga Instagram iyo YouTube. Taabo taabashada ku dar bogga 'Instagram'.
Hadda waxaa lagu geyn doonaa galitaankaaga Instagram. Buuxi caddaymaha ay ka midka yihiin lambarkaaga taleefanka, magaca isticmaalaha, ama emaylka, iyo erayga sirta ah. Ka dib riix gal gelitaanka. Waxaa lagugu geyn doonaa astaantaada guud adoo maraya TikTok.
Hadda dhagsii ikhtiyaarka "Oggolow" si aad ugu oggolaato koontadaada inay gasho akoonka Insta.
Tani waa sida loogu daro insta to tik tok taleefankaaga moobaylka. Hadda waxaad si toos ah ula wadaagi kartaa cajaladaha fiidiyowgaaga taleefankaaga si aad uga shubto barnaamijka TikTok. Looma baahna inaad maraan dariiqa dheer ee udub dhexaadka u ah kala beddelashada labada dalab.
Tan waad sameyn kartaa sidoo kale. Dadka isku dayaya inay ku xiraan koontooyinkooda ganacsi ee Instagram ama koontadooda labaad ee Instagram ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaatooyin qaar. Kuwa ugu caansan taas oo ah arin sirta ah oo qalad ah. Way fududahay in la xaliyo. Marka tan la sameeyo, habku wuxuu leeyahay talaabooyinka sahlan ee soo socda.
Tag cinwaankaaga Labaad ama ganacsigaaga bartaada Instagram.
Taabo 'Abuur furaha eraygan' ikhtiyaarka '
Sii koonto sirta ah koontadaas.
Hada u isticmaal cadeymahaan inaad ku xirto barta Instagram ee TikTok. Marka sidan ayaa ah sida loogu xiro Instagramka TikTok ee ganacsiga ama koontada Instagram labaad.
Sabab kasta oo aad rabto inaad kala dirto labada xisaabaad maxaad samayn lahayd? Xaaladdan oo kale, waa inaad ku celisaa nidaamka ku xusan kiiska hore.
Halkan halka aad ka riix lahayd ikhtiyaarka "Add Instagram". Waa inaad riixdaa batoonka "Xarigga". Markaas barnaamijka TikTok wuxuu si otomaatig ah u tirtiri doonaa faahfaahintaada Instagram.
Marka adeegsiga talaabooyinkan sida loogu daro 'Instagram' Tik Tok waxay noqotaa hawl fudud. Hadda samee oo noloshaada u fududaato.
Sidee ayaan Instagram-kayga ugu soo daro My TikTok
Sida loogu daro Insta Tik Tok
Sida loogu daro xisaabta ganacsiga 'Instagram' ee TikTok
Sida loogu daro Instagram TikTok
wax soo saarka (21)